आर्यनलाई प्रश्न : अंग्रेजी नामको चलचित्र फापेको हो ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
आर्यनलाई प्रश्न : अंग्रेजी नामको चलचित्र फापेको हो ?
एक समय आर्यन सिग्देललाई बक्सअफिसको हिट मेशिन भन्ने गरिन्थ्यो । कतिपयले उनलाई नेपाली चलचित्रको नम्बर वान अभिनेता समेत भन्ने गरेका थिए । दशक अगाडि लभस्टोरी चलचित्रमा निर्विकल्प अभिनेताको रुपमा आफूलाई उभ्याएका उनी लभस्टोरी चलचित्रमा मनछुने अभिनय गर्न सिपालु छन् । लभस्टोरी चलचित्रमा उनी जति उम्दा अभिनय गर्ने अरु अभिनेता नभएको चर्चा आज पनि हुने गरेको छ ।
नेपाली चलचित्रमा राम्रो माग हुँदा गुणस्तरभन्दा संख्यात्मक अभिनयमा जोड दिएपछि उनको स्टारडम कमजोर बनेको छ । आर्यन केही वर्षयता एउटा हिट चलचित्रको खोजीमा छन् । उनी अभिनीत पछिल्ला कुनै चलचित्र सफल छैनन् । गत वर्ष उनी अभिनीत दुई चलचित्र ‘हजार जुनीसम्म’ र ‘चच हुईं’ प्रदर्शनमा आएका थिए । तर, दुवै चलचित्रले उनको डुब्न लागेको करिअर बचाउन सकेनन् ।
अब उनी नयाँ चलचित्र ‘डिसेम्बर फल्स’ मा काम गर्ने तयारीमा छन् । शनिवार यो चलचित्रको राजधानीमा एक कार्यक्रममा बीच निर्माण घोषणा गरिएको छ । माघबाट छायांकन सुरु हुने चलचित्रमा सलोन बस्नेतको पनि अभिनय रहनेछ । ‘डिसेम्बर फल्स’ अंग्रेजी नाम हो । आर्यनले यसअघि पनि अंग्रेजी नाममा बनेका ‘फस्ट लभ, नोभेम्बर रेन, क्लासिक, होमवर्क, आई एम सरी’ चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
उनलाई अंग्रेजी नाममा बनेका चलचित्र फाप्छ समेत भन्ने गरिन्छ । ‘फस्ट लभ, नोभेम्बर रेन र क्लासिक’ यसका उदाहरण हुन् । आर्यन भने अंग्रेजी नामका चलचित्रमा आबद्ध हुनुलाई संयोगको रुपमा लिन्छन् । ‘डिसेम्बर फल्स’ को घोषणा कार्यक्रममा उनले भने, ‘मलाई अंग्रेजी नाम फापेको हो कि अंग्रेजी महिना फापेको हो, थाहा भएन । तर, चलचित्रको मुडलाई बोक्ने टाइटल हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भए पनि समस्या छैन ।’
के हो ‘पोइ पर्‍यो काले’ को सिक्वेल विवाद ?
दुई वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको शिशिर राणा निर्देशित चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’ को सिक्वेल निर्माण
चलचित्र पाइरेसीको आरोपमा लमजुङका युवक पक्राउ
दर्जनौं नेपाली चलचित्रको पाइरेसी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । ‘सिनेमा घर एप’
कविराजले निर्देशनमा डेब्यू गर्दै, ‘मिरर’ मा आर्यन र उपासना
सयौं नेपाली चलचित्रका गीतमा कोरियोग्राफी गरेका कविराज गहतराजले अब चलचित्र निर्देशनमा डेब्यू गर्ने भएका छन्